Shina OEB5 mpanamboatra zavamaniry onkey azo atsofoka vial turnkey | IVEN
Oncology (tsindrona & OSD)
IVEN Pharmatech no mpamatsy mpisava lalana ny turnkey zavamaniry izay manome vahaolana injeniera mitambatra ho an'ny orinasa mpamokatra fanafody eran-tany toa ny vahaolana IV, vaksinina, onkolojia sns, mifanaraka amin'ny EU GMP, US FDA cGMP, PICS, ary WHO GMP.
Izahay dia manome ny volavolan-drafitra mety indrindra, ny fitaovana avo lenta ary ny serivisy namboarina ho an'ny ozinina isan-karazany amin'ny pharmaceutika sy fanafody avy A ka Z ho an'ny vahaolana malefaka IV tsy kitapo IV, vahaolana PP tavoahangy IV, vahaolana Vial IV vera, Injectable Vial & Ampoule, Syrup, Tablets & Capsules, fantsom-panangonana ra vakum sns.
Inona no idiran'ny zavamaniry IVEN Injectable oncology vial turnkey:
Ny vahaolana enti-miasa ao amin'ny IVEN ho an'ny ozinina tavoahangy onkolojika misy tsindrona dia ahitana ny efitrano madio, ny rafitra fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso, ny rafitra fitsaboana rano amin'ny fanafody, ny rafitra fanomanana sy ny fizarana, ny fanasana tavoahangy - fanamafisana sy fanalefahana - famenoana - fijanonana - fanakanana - fanasana ivelany, fanala. rafitra fanamainana, rafitra mitokana, rafitra famonosana, rafitra lozisialy mandeha ho azy, rafitra fanaraha-maso kalitao, laboratoara afovoany sns. Mifantoka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa tsirairay, IVEN dia mandanjalanja tsara ny vahaolana momba ny injeniera ho an'ireo mpampiasa amin'ny:
Dingana fiasan'ny vokatra
1. Fanasana tavoahangy onkolojika azo sorohana - fanalana volo sy fanalefahana - famenoana - fijanonana - famonoana - tsipika famokarana fanasana ivelany:
Ity tsipika ity dia ampiasaina hamokarana tavoahangy onkolojika azo tsindrona, izay misy milina 5: Masinina fanasan-damba ultrasonika miteraka servo, milina fanodinana rivotra mafana sy fantsom-panafody, milina fanodinana solo-volo feno servo, milina fanakonana vial ary masinina fanasana ivelany.
Aorian'ny famenoana dia handeha ho any amin'ny semi-stoppering izy ary vonona amin'ny fanamainana mangatsiaka, avy eo dia hifindra amin'ny milina fanamafisam-peo, aorian'izay dia handeha amin'ny milina fanasan-damba ivelany. Mampiasa rafitra fandanjana an-tserasera izahay amin'ny famenoana ny milina, ny vokatra tsy mendrika dia holavina ho azy.
3. Famenoana & fanakanana
5. Fanasana ivelany
2.Fanamaina fanamainana sy rafitra famoahana fiara ary famoahana fiara:
Ho an'ny vokatra lyophilized, aorian'ny famenoana sy semi-stoppering, dia hampitaina amin'ny fanamainana mangatsiaka (Lyophilizer) ho azy amin'ny alàlan'ny rafitra famoahana fiara, aorian'ny lyophilized, dia hampitaina amin'ny masinina fanakanana amin'ny alàlan'ny rafitra famoahana fiara.
3. Rafitra mitokana:
Satria onkolojia dia vokatra misy poizina, afaka manampy amin'ny isolator isika hitandrina ny fiarovana ny mpandraharaha amin'ny vokatra, hahazoana antoka fa voaro tanteraka amin'ny alàlan'ny rafitra mitoka-monina ny fizotry ny famokarana.
1.Operator dia misaraka tanteraka amin'ny faritra famokarana tsy misy ilana azy.
2.Ny faritra famokarana anatiny. Efitra madio ivelany ivelany C / D.
3.Ny irery ihany no afaka manokatra ny isolator aorian'ny fanakatonana ny rafitra, ilaina ny fanamarinana ho an'ny famerenana.
4.Ataovy manokana ny HPVS amin'ny fanafoanana ny tany.
5. Rafitra mivezivezy voaporofo.
6.Adopt ny fidirana amin'ny rivotra HEPA, ny membrane dia afaka miaro ny fikorianan'ny rivotra sy ny sivana.
7.Miorina tsara rafitra anatiny, famolavolana boribory.
8.Adopt tombo-kase inflatable ho an'ny varavarankely misokatra sy varavarankely.
9. Ho an'ny vokatra misy poizina, ampiasao ny volavolan-kitapo-kitapo.
1. Rafitra CIP / SIP (SIP avy amin'i VHP).
2. Fanaraha-maso an-tserasera ny Particle Counter.
3. Sampirera azo zahana an'habakabaka.
4. Generator Hydrogen Dioxide Generator.
5.Leak Detector an'ny fonon-tanana.
9. Modely fitsapana fitiliana estetika.
11. Toeram-panovana fanovana sivana ao anaty harona.
4. Rafitra famonosana:
Izy io dia afaka mamita fanaraha-maso jiro oncology tavoahangy azo tsaboina, fanaraha-maso ny famoahana, fametahana marika, blister amin'ny fonosana voalohany, ary famonosana baoritra fandefasana.
Azontsika atao ny manampy amin'ny fanokafana ny carton automatique automatique, ny torolàlana momba ny torolàlana ary ny fanamafisana ny fanoratana, ny fonosana baoritra, ny famehezana ny carton, ny fametahana ny labozia, ny rafitra fanarahana data, ary ny rafitra fandavana fiara, izay afaka mandà ireo baoritra misy lanjany tsy mety, na ireo izay manana marika tsy mendrika.
5. fitsaboana rano pharmaceutika:
Tafiditra ao anatin'izany ny fanadiovana rano voadio (2RO + EDI), ny rano manadio rano (WFI), ary ny mpamokatra entona madio. Ny tanky PW sy tank WFI dia tafiditra ao koa.
7. Efitrano madio sy HVAC:
Tafiditra ao anatin'izany ny takelaka rindrina madio, ny valindrihana valindrihana, ny varavarankely, ny varavarana, ny gorodona, ny jiro, ny fitaovana fikirakirana ny rivotra, ny sivana HEPA, ny fantson-drivotra, ny fanairana, ny rafitra fanaraha-maso fiara sns. .
Izy io dia misy ny rafitra compressor rivotra sy ny rafitra boiler hanomezana rivotra sy setroka ilaina amin'ny famokarana oncology tavoahangy azo atsofoka.
Ahitana karazana fitaovana fanandramana laboratoara rehetra, ary fanaka laboratoara hanaovana andrana santionany oncology tavoahangy azo zakaina sy ny akora, toy ny efitrano fitoniana, HPLC, fitrohana atomika, spectrometer ultraviolet, spectrometer infrared efatra hanova sns.
10. Rafitra fizarana sy fantsona:
Izy io dia misy karazana fantsona fantsona sy fantsona indostrialy ilaina amin'ny fantsom-panafody onkolojia vatan-tsindrona toy ny rano voadio, rano fanindronana, etona madio, rano mangatsiaka, rano mangatsiaka, rivotra voahidy, etona indostrialy sns.
IVEN dia manana ekipa teknika sy injeniera tena matihanina, ny fiofanana eto an-toerana sy ny fanampiana aorinan'ny varotra dia afaka manome antoka ara-teknika maharitra ho an'ny orinasa turnkey onkology turnkey:
IVEN dia manara-maso ny mpanjifa turnkey pharmaceutika:
Hatramin'izao, izahay dia efa nanolotra fitaovam-panafody an-jatony sy fitaovana fitsaboana ho an'ny firenena maherin'ny 50.
Mandritra izany fotoana izany dia nanampy ny mpanjifanay izahay hanangana orinasa 20+ famenon-java-mahadomelina sy toeram-pitsaboana turnkey any Russia, Uzbekistan, Tajikistan, Indonesia, Thailand, Saudi, Iraq, Nigeria, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Myanmar sns, indrindra ho an'ny vahaolana IV, tavoahangy azo ampidirina ary ampoules. . Ireo tetikasa rehetra ireo dia nahazo ny hevitry ny mpanjifanay sy ny governemanta.
Nanondrana ny làlam-pamokarana vahaolana IV tany Alemana ihany koa izahay.
Indonezia IV zavamaniry turnkey
Zavamaniry turnkey Vietnam IV
Ozbekistan IV tavoahangy turnkey
Thailand zava-maniry mitaona tavoahangy azo atsofoka
Tajikistan IV tavoahangy turnkey
Saudi Arabia IV zavamaniry turnkey
Ny fahaiza-manaon'ny zavamaniry IVEN izay azo atsofoka oncology vial turnkey:
Previous: Kitapo malefaka tsy-PVC IV vahaolana turnkey zavamaniry
Manaraka: Zavamaniry turnkey fantsom-panafody